Zapiet: Alefaso ny pickup sy ny pickup store amin'ny Shopify | Martech Zone
Miaraka amin'ireo firenena tafasaraka amin'ny fiparitahan'ny COVID-19, sahirana ny orinasa hitazomana ny mpiasan'izy ireo hiasa, hisokatra ny varavarany ary hivelomana. Nandritra ny roa volana farany dia nanampy a toeram-piompiana eo an-toerana manao fanaterana hena any Indianapolis miaraka amin'ny azy ireo Shopify fametrahana. Nanana mpivarotra maromaro izy ireo izay nanangona ny rafitra talohan'ny nahatongavako tao anaty sambo ary miasa aho mba hanamafisana ny fampidirana sy ny fanatsarana rehefa tonga ny areti-mandringana.
Miasa andro aman'alina ny toeram-pambolena mba haharaka ny fangatahana, ary miaraka amin'izany ny fanohanako ny mpanjifa farany ary koa ny mpiasa. Tsy nanana ara-teknika na iza na iza hanampy izy ireo ary betsaka ny fampidirana tanana. Na izany aza, ny fisongadinana iray amin'ny fametrahana an'i Shopify dia ny rindrambaiko namboarin'i Zapiet ho an'ny fanangonana sy fanaterana magazay.
Fandraisana an-tsena Zapiet + Fanaterana
Afaka namorona niavaka aho tamin'ny fampiharana azy ireo kaody miorina amin'ny kaody izay nametraka ny ora fiomanana sy ny andro fanaterana. Afaka nanampy toerana fivarotana ihany koa izahay mba hakain'ny mpanjifa mivantana ny baikony. Ny fotoam-panomanana dia ahafahan'ny mpiasa manana fotoana manangona ny baiko, manavesatra ary manatitra azy ireo na manangona azy ireo. Amin'ny raharahan'ity mpanjifa ity dia nanana ny heriny manokana izy ireo. Ny fampiharana dia mifangaro amin'ny serivisy fandefasana hafa koa.
Ny fampidirana amin'ny sarety Shopify dia milamina, mamela ny mpanjifa hisafidy fanaterana na fivarotana pickup. Raha ny fandefasana azy, ny kaodim-paositra na ny zip dia voamarina ho toerana atolotra azy ary misy mpifidy daty omena hisafidianana ny daty anaovana azy. Raha kitapo fivarotana izany dia azonao atao ny mahita ny fivarotana akaiky indrindra. Raha toerana iray monja no anananao dia misafidy fotsiny ianao rehefa te handray ilay baiko. Ity misy toa azy eo amin'ny tranokalan'ny mpanjifako:
Pejy fandraisana: Raha any afovoan'i Indiana ianao ary te hanandrana fanaterana trano any Tyner Pond Farm, ity misy 10% fihenam-bidy amin'ny baiko voalohany!
Zapiet's Shopify App dia nahomby tokoa ka ny ekipa mpanohana azy ireo dia nilaza fa nanampy trano fivarotana maherin'ny arivo nandritra ity krizy ity. Miasa andro aman'alina ny ekipa any mba hanampy an'ireo mpanjifa ireo eny amin'ny sambo sy hanamboatra ny app-ny.
Miovaova be ny fampiharana. Raha nila nanidy ny fidinan'ny magazay izahay, dia mora toy ny namono azy tao anaty app ary azonay atao hatrany ny mamela azy io rehefa vita ny krizy. Nampiasainay koa ny bara hafatra tsara izay niaraka tamin'ny fampiharana, ahafahan'ny mpitsidika vaovao manamarina raha toa ka manome ny kaody zip-dry zareo.
Endri-javatra amin'ny Pickup Store + Delivery Include:
Fahafahana vokatra - Mariho ny vokatra tsirairay fa tsy misy afa-tsy amin'ny fakana entana, fandefasana na fandefasana.
Shopify fampidirana POS - Jereo, tantano ary alamino ny baiko pikarinao sy ny fandefasanao ao amin'ny magazay.
Fanisana amin'ny toerana maro - Ampifanaraho ary asehoy ny fahafahan'ny mpanjifa miaina isaky ny toerana.
Fitantanana ny filaminana - Jereo indray mipy maso izay baiko mila miomana amin'ny andro na fivoahana manokana.
Fisorohana ny hosoka - Ataovy azo antoka ho azo antoka ny kaominao amin'ny fisolokiana amin'ny alàlan'ny fampiharana ny endrika Security Code an'ny fampiharana.
Toerana tsy manam-petra - Manafatra mora foana ny toerana misy anao rehetra ary tantano tsirairay.
Customizability be - Famaritana ny fisian'ny, breakpoints, offset, mandeha ho azy, fitsipika ary maro hafa.
Mpisafa daty sy ora - Apetraho amin'ny elanelam-potoana 5 minitra ny toerana misy sy ny vokatra ary avelao hisafidy ny mpanjifa.
Mifanaraka tanteraka - Ampifandraiso amin'ny Deliv, Quiqup, fandefasana intuitive, fandefasana Bespoke, fitsipika fandefasana avo lenta ary maro hafa. Jereo daholo Ny fampidirana an'i Zapiet.
Fanohanana ny filaharana - Avadiho ho toy ny baiko haka na fandefasana ny kaomandy efa misy.
Fetran'ny slot amin'ny fandefasana - Sorohy ny fandaniam-bola be loatra amin'ny alàlan'ny famerana ny isan'ny fanaterana isaky ny fotoana nomena.
Fanamarinana Geodistation - Manolora ho azy ny vidiny sy serivisy mifanaraka amin'ny toerana misy ny mpanjifa.
Ary, raha te hamboarina ny tahan'ny fandefasana anao dia manana fampiharana ihany koa i Zapiet Ny tahan'ny fandefasana amin'ny elanelana or Ny tahan'ny fandefasana amin'ny kaody kaody. Zapiet dia manolotra fanandramana maimaimpoana mandritra ny 14 andro, mba hahafahanao manamarina ny fampiharana mifanaraka amin'ny fandehananao ary manao izay ilainao. Manafoana ao anatin'io fotoana io dia tsy hahazo vola ianao.
Mametraha Toerana fivarotana Zapiet + Fanaterana
Tags: fampiharana fanateranafanaterana an-trano ecommercefakana fivarotana ecommerceshopifyFividianana fivarotana fivarotanaTyner Pond toeram-piompiana
Lexio: ovao ho lasa fiteny voajanahary ny angona